Espinoza iyo dhulgariirta ayaa garaacay Timbers 3-0 - TELES RELAY
ACCUEIL » SPORTS »Espinoza iyo dhulgariirta ayaa ku garaacay Timbers 3-0
Espinoza iyo dhulgariirta ayaa ku garaacay Timbers 3-0
TELES RELAY 7 April 2019
WASHINGTON (AP) - Diego Rossi ayaa seddex gool u dhaliyay seddexleydiisii ​​ugu horeysay ee xirfadiisa MLS, iyo Los Angeles FC jabiyay kubadda DC United laguma garaacay xilli ciyaareedkii caadiga ahaa iyadoo 4 ay ku badisay 0 Sabtidii
Carlos Vela waxa uu dhaliyay goolkiisii ​​7aad ee xilli ciyaareedkan MLS daqiiqadii 15e, isagoo ka jabay lugta bidix. sare ee dusha sare si aad u siiso LAFC (5-0-1) madaxa.
Ciyaaryahanka khadka dhexe Rossi ayaa kubada gacanta ku dhuftay Vela dhanka bidix, ka dibna uu ku soo galay qeybta bidix ee lugta bidix. boostada ku dhow 27. Rossi ayaa markii ugu horeysay dhaliyey 5 daqiiqo ka dib si uu u dhaliyo 3-0 qeybtii labaad, isagoo dhaliyay goolka daqiiqadii 15-aad ee 76e.
Vela iyo Rossi ayaa dhaliyay goolal dheeri ah (13) xilli ciyaareedkan kooxaha kale ee MLS.
LAFC ayaa ku guuleysatay seddex kulan oo isku xigta oo ay ku guuleysteen kooxda 19-5 xilli ciyaareedkan.
DC United (3-1-1) ayaa ku dhaawacmey nin ka dib Wayne Rooney ka mid ah hoggaamiyeyaasha ee MLS xilli ciyaareedkan, isagoo dhaliyay afar gool iyo seddex caawin galay, ayaa casaan la kaarka cas khatar ah wax looga qabto 52e Rossi.
Tani waa guuldaradii ugu xumeyd ee United tan iyo markii go'aanka 4-0 ay ka soo horjeedeen Portland Timbers 15 Oktoobar 2017.
3 JARTHQUAKE, TALAABO 0
SAN JOSE, California (AP) - Cristian Espinoza gool dhaliyey iyo caawiye iyo San Jose goolalkiisii ​​ugu horeeyay ee xilli ciyaareedkan.
Shea Salinas furay dhibcaha iyagoo dhaliyay goolal. at daqiiqo 15e, ka gudbidda bartamaha goob jeebka si ay u dhammeeyaan bartamaha Espinoza.
Dhulgariirka (1-4-0) wuxuu hoggaamiyay 2-0 daqiiqad 33e markii Danny Hoesen wuxuu isku tuuray kubad dabacsan oo dhinaca bidixda ah ee ciqaabta, wuxuuna ku dhuftay saqafka shabaqa.
Espinoza ayaa goolka dhaliyay daqiiqad ka dib, isagoo xaday barbardhac xun islamarkaana uu ku guuleystay goolka hoose ee goolhayaha hortiisa.
San Jose ayaa jabiyay rikoorkii guul darro shan kulan ah xilli ciyaareedkii hore.
Timbers (0-4-1) ayaa laga badiyay kulan afaraad oo isku xiga.
CREW 1, REVOLUTION 0
COLUMBUS, Ohio (AP) - Josh Williams markabkuna wuxuu yimid keligii hore ee shirkii bariga.
Williams ayaa la siiyay halka Federico Higuain (1945). ] laad xor ah oo dib u soo noqnoqonaya daqiiqad 42e. Passportka go'aanku wuxuu ahaa booska 61e Higuain ee Columbus (4-1-1), oo dhigay rikoorkii kooxda.
New England (1-4-1) ayaa lumisay nin daqiiqad ah 64e markii Michael Mancienne ayaa casaan loo siiyay kaarka labaad ee jaalaha ah.
Revs ayaa cadaadisay oo fursad u helay inay gool dhaliyaan daqiiqad 89th, laakiin goolka barbaraha Zack Steffen beeniyay Cristian Penilla .
DABKA 2, TORONTO FC 2
TORONTO (AP) - Jonathan Osorio gool ku dhaliyay daqiiqad 76e isagoo kor u qaaday Toronto FC Isku siman dabka.  Toronto (3-0-1) ayaa ah kooxda kaliya ee MLS si ay u helaan rikoodh wanaagsan maalintaas. Wuxuu sii ballaariyay guuldaradii aan la loodin karin ee Chicago 26 Sept. 2015, at 10.
Jozy Altidore waxaana uu gool u dhaliyay Oscario. Goolka koowaad ee garoonka ku dhow meel u dhow garoonka, rigoore xoogan ayaa loola cararay Jeremiah Gutjahr ka hor inta aan la siin xarun qurux badan Osorio jihada.
CJ Sapong et Nemanja Nikolic wuxuu u dhaliyay Chicago (1-2-2) ka hor 26.25 at BMO Field.
MINNESOTA UNITED 2, BULSHO BULLS 1
HARRISON, NJ (AP) - Abu Danladi et Romario Ibarra gool u dhaliyey kooxda hogaanka heysa ee Manchester United.
Danladi waxa ay soo bandhigtay Minnesota United (3-2-0) daqiiqada 34e daqiiqadii 34e. Xarunta Angelo Rodriguez.
Joojinta goolka Rodriguez ayaa sababay in Romario uu garaaco gurigiisa 50e daqiiqadii ugu danbeysay, taasoo keentay in 2-0 uu hogaamiyo Minnesota.
] Cristian Casseres Jr . in la joojiyo si loo yareeyo khaladaadka Red Bulls daqiiqada 70ème. Tani waxay ahayd goolkii ugu horeeyay ee 19 Venezuelan ee MLS.
Alex Muyl Red Bulls
Maqaalkani wuxuu horey u soo galay (Ingiriisi) https://www.foxsports.com/soccer/story/los-angeles-fc-pounds-dc-united-4-0-040619
Dood wadaaga: Milan ayaa qorsheyneysa inay qaaddo talaabo yaab leh oo ku aadan Pochettino
Piqué oo iibsanaya Real Madrid, PSG ayaa ku dhameysatay Tuchel - Daily # 443 - VIDEO
Sidee ayuu James Holzhauer u bedelay 'Jeopardy!' Mashiinkaaga gaarka ah? Waxaan weydiinay - New York Times